ကရ်ဘလာ - Howling Pixel
ကရ်ဘလာဆိုသည် ဝေါ်ဟာရသည် (အရဗီပုဒ်: ‎كَرْبَلَاء‎, ပါးရှန်းပုဒ်: ‎کربلاء‎)မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အိရန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသရှိ, ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်၏ ‎အနောက်တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ(၁၀၀) မိုင်ပေါင်း(၆၂)အကွာ၊ (Milh)ရေကန်၏ အရှေ့ဘက် ‎မိုင်အနည်းငယ်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ‎. ကရ်ဘလာမြို့သည် ကရ်ဘလာတိုင်း၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၅)သန်းခေါင်စင်းအရ လူဦးရေ (၇၀၀၀၀၀) ‎ခုနှစ်သိန်းခန့် ရှိသည်။ ‎
ခရစ်နှစ်(၆၈၀)ခုနှစ်တွင် တမန်တော်မြတ်၏မြေးတော်များဖြစ်သည့် (Masjidayn : ဗလီနှစ်ခု ဆိုလိုသည်မှာ) ‎ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ) နှင့် ဟဇရသ်အဘ္ဘားစ်(အ.စ) တို့နှင့်အတူ အဲဟ်လေဘိုင်သ် အိမ်တော်သူ ‎အိမ်တော်သားများ ဤအရပ်ဒေသတွင် စစ်ဖြစ်ခဲ့၍ ရှဟီးဒ်ဖြစ် ကျဆုံးခဲ့ရသည့်အတွက် လူသိများလာခဲ့သည့် ‎ဒေသဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကရ်ဘလာအရပ်ဒေသသည် သဲကန္တရတစ်ခုမျှသာ ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ‎အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ) နှင့် ဟဇရသ်အဘ္ဘားစ်(အ.စ)တို့၏ ဂူဗိမ္မန်များရှိတည်ရှိရာဖြစ်သောကြောင့် ‎လူများလာရောက်နေထိုင်လာကြသည်။ ကရ်ဘလာမြို့သည် ရှိအာမွတ်စ္စလင်မ်များနှင့် ‎အဲဟ်လေဘိုင်သ်များကို အချစ်ထားသူတို့အဖို့ အထွတ်အမြတ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ရာ မက္ကာမြို့၊ မဒီနာမြို့၊ ‎ဂျေရုစလင် စသည့်အထွတ်အမြတ်ထားရာမြို့တော်များကဲ့သို့ အထွက်အမြတ်ထားကြသည်။‎  သန်းပေါင်းများစွာသော ရှီအာမွတ်စ္စလင်မ်များနှင့် အဲဟ်လေဘိုက်သ်တို့အား အချစ်ထားသူတို့သည် ‎တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ဤမြို့သို့လာရောက်၍ ဇေယာရသ် ဂါဝရပြုကြသည်။  အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)နှင့် ဟဇရသ်အဘ္ဘားစ်(အ.စ)တို့ ရှဟီးဒ်ဖြစ်ကျဆုံးခဲ့သည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည့် ‎‎(Āshūrā) နေ့တွင်လူဦးရေ (၈)သန်းခန့်လာရောက်ကြသည်။ ထိုနေ့၏ရက်လေးဆယ်နေ့(Arba'īn)တွင်လည်း ‎လူဦးရေ သန်း(၃၀)ခန့်သည် နိုင်ငံပေါင်း (၅၆) နိုင်ငံမှ လာရောက်စုဝေး ဂါဝရပြုကြသည်။ 
ကိုဩဒိနိတ်: 32°37′N 44°02′E﻿ / ﻿32.617°N 44.033°E
ကရ်ဘလာ၏ ဝေါဟာရ ရင်းမြစ်
ကရ်ဘလာသည် အရဗီ ဝေါ်ဟာရ ကရ်ဘ် နှင့် ဘလာ နှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကရ်ဘ် ဆိုသည်မှာ ‎ဒုက္ခဖြစ်စေသောအရပ်ဒေသ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပြီး ဘလာဆိုသည်မှာ ဘေးအန္တရယ်များဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
အဘ္ဘားစီမင်းဆက် မိုသဝကိလ်၏ အမိန့်ဖြင့် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)ရောင်ဇာ ဂူဗိမ္မာန်အား ဖြတ်ဆီးနေပုံ။
အစ္စလာမ်တွင် ကရ်ဘလာအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ရလဒ်ကြောင့် ရှီအာမွတ်စ္စလင်မ်များအကြား ‎အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်လာရသည်။ ထိုအခင်းသည် အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်နေ့ ခရစ်နှစ်(၆၈၀)၊ ‎မိုဟရမ်လ (၁၀)ရက်နေ့ ဟစ်ဂျရီခုနှစ် (၆၁)တွင် အီရတ်နိုင်ငံ ကရ်ဘလာသဲကန္တရတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ‎အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)နှင့် နောင်တော်ဖြစ်သူ ဟဇရသ်အဘ္ဘားစ်(အ.စ)တို့ကို ‎ဗနီအစက်ဒ် မျိုးနွယ်စုမှ မြေမြုပ်သင်္ဂြိုဟ်ပေးခဲ့ရာ ယနေ့တွင် ((ဘိုင်နွလ်ဟရမိုင်း) ‎အဖြစ်ကြော်ကြားခဲ့လေသည်။ ထိုအခင်းဖြစ်ပွားမှုသည် ထိုခေတ်ကာလ ယဇီးဒ် အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူသည် ‎အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)ထံမှ သစ္စာခံရန်တောင်းဆိုခဲ့ရာ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)မှ ငြင်းဆန်ခဲ့သောကြောင့် ‎ကရ်ဘလာအခင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်။ ကရ်ဘလာဒေသအနီး ကူဖာပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူ ‎အိုဗိုင်ဒွလ္လာအိဗ်နေဇေယားဒ်သည် မြင်းဆီးစစ်သည် (၃၀၀၀၀)ခန့်ကို အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)ကိုဆန့်ကျင်ရန် ‎စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုစစ်သည်များသည် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)နှင့် နောက်လိုက်သားများအား ယဇီးဒ်၏ ‎သစ္စာခံယူရန်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင် ဒူးထောက်ရန် ရေကိုဖြတ်တောက်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ‎အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)သည် မိုဟရမ်လ (၉)ရက်ညတွင် ဆုတောင်းပတနာပြုရန် အချိန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ‎မိုဟရမ်လ (၁၀)ရက်နေ့တွင် နောင်တော်ဖြစ်သူ ဟဇရသ်အဘ္ဘားစ်(အ.စ)မှ စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ဦးဆောင်၍ ‎တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)၏ သားတော်များဖြစ်သော အလီအက္ကဘရ်နှင့် ‎ခြောက်လသားအရွယ် အက်္စဂရ် နှင့် တူဖြစ်သူ ကာစင်မ်၊ အော်န်၊ မိုဟမ္မဒ် နှင့် တစ်ခြားသော ‎ဆွေတော်မျိုးတော်များနှင့် နောက်လိုက်တပည့်သားကောင်းများ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။
ထိုနောက် ယဇီးဒ်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)၏ အိမ်တော်သူအိမ်တော်သားများအား သုံ့ပန်းအဖြစ် ‎အုပ်ချုပ်ရေးအခြေစိုက်ဖြစ်သည့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြသည်။ ထိုသုံ့ပန်းများအား ‎လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးခဲ့လေသည်။ ထိုကြောင့် အနွယ်တော်မွန်တို့သည် မက္ကာမြို့သို့အပြန်ခရီးတွင် ‎ကရ်ဘလာသို့သွားရောက်၍ အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)၏ ဂူဗိမ္မာန်သို့သွားရောက် ဇေယာရသ် ‎ဂါဝရပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ချို့အဆိုများတွင် ခရစ်နှစ်(၆၈၅)တွင် ဆိုလိုင်မန်ဗင်ဆိုရဒ်သည်လည်း ထိုဂူဗိမ္မာန်သို့ ‎သွားရောက်ဇေယာရသ်ပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ထိုနေရာသည် တဖြည်းဖြည်းဖြင့် ‎အေမာမ်ဟိုစိုင်န်(အ.စ)၏ ဂူဗိမ္မာန်တစ်ခုဖြစ်လာပြီး လူတို့လာရောက်ဂါဝရပြုလာကြသည်။ ထိုနောက် ‎လာရောက်ဂါရဝပြုသူတို့ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာမှ မြို့တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုဂူဗိမ္မာန်သည် ‎မွတ်စ္စလင်မ်အုပ်ချုပ်ရေးမင်းများ၏ ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် တိုးချဲ့လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ‎တစ်ချို့အုပ်ချုပ်ရေးမင်းများ၏ ဖျက်ဆီးခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရသည်။ ခရစ်နှစ်(၈၅၀)တွင် ‎အဘ္ဘာစီအုပ်ချုပ်ရေးမင်းဆက်ဖြစ်သည့် မိုသဝကိလ်သည် ဂူဗိမ္မာန်အား မြေနှင့်တစ်သားဖြစ်သည်အထိ ‎ဖြတ်ဆီးခဲ့သည်။ သို့သော် ခရစ်နှစ်(၉၇၉)တွင် အသစ်တဖန် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ‎ခရစ်နှစ်(၁၀၈၆)တွင် စစ်သည်တို့သည် ဂူဗိမ္မာန်၏ အချို့အပိုင်းများအား မိးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ ထိုနောက် ‎လူတို့သည် ပြန်လည်မွန်းမံ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
↑ Iraq: Governorates, Regions & Major Cities - Population Statistics in Maps and Charts။
↑ Iraq: Livelihoods at risk as level of Lake Razaza falls။ IRIN News (5 March 2008)။ 25 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (January 2004) Under Fire: Untold Stories from the Front Line of the Iraq War. Reuters Prentice Hall, 15. ISBN 978-0-13-142397-8။
↑ (2006) Islam in the World. Oxford University Press, 180. ISBN 9780195305036။
↑ (11 Jan 2013) Political and Economic Dictionary of the Middle East. Karbala (Kerbala): Routledge. ISBN 9781135355616။
↑ (26 May 2009) My Neighbour's Faith: Islam Explained for African Christians. Main Divisions and Movements Within Islam: Zondervan. ISBN 9780310574620။
↑ (2006) A Brief Guide to Islam: History, Faith and Politics : the Complete Introduction. Carroll and Graf Publishers, 212. ISBN 9780786718047။
↑ Interactive Maps: Sunni & Shia: The Worlds of Islam။ PBS။ June 9, 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Walking Freedom: Iraq home of largest rally against terror in the world။ RT။ November 20, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ al-Qummi, Ja'far ibn Qūlawayh (2008). Kāmil al-Ziyārāt. Shiabooks.ca Press, 545။
↑ World Weather Information Service – Karbala။ United Nations။ 1 January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Staff writers။ The Saud Family and Wahhabi Islam, 1500-1818။ 8 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ (2003) Encyclopedia of Islam and the Muslim world, [Online-Ausg.], New York: Macmillan Reference USA. ISBN 0-02-865603-2. OCLC 52178942။
↑ Khatab, Sayed. Understanding Islamic Fundamentalism: The Theological and Ideological Basis of Al-Qa'ida's Political Tactics (in en). Oxford University Press. ISBN 978-977-416-499-6။ 11 August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vassiliev, Alexei. The History of Saudi Arabia (in en). Saqi. ISBN 978-0-86356-779-7။9August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဇိုင်နဘ်ဘေကွဘ်ရာသခင်မကြီး(စ.အ)သည် အလီအိဘ်နေအဘီသွာလိဘ်(အ.စ)နှင့်ဖှာသေမာသခင်မကြီး(စ.အ)တို့၏ သားသမီးများအတွင်းမှ တတိယမြောက်ဖြစ်လေသည်။သခင်မကြီးသည် ရှီအာတို့၏ အလွန်မှပင် အလေးပေးအထွဋ်အမြတ်ထားခံရသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရှီအာတို့သည် ထိုသခင်မအား ဟဇ်ရသ်-သေ-ဇိုင်နဘ်ဟု တမ်းတခေါ်ကြလေသည်။ဇိုင်နဘ်သခင်မ(စ.အ)သည် ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)၏ နှမတော်ဖြစ်ပြီး ကရ်ဘလာဖြစ်စဉ်တွင် သက်ရှိထင်ရှားရှိနေခဲ့ပြီး အကြောင်းစုံအား မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပေသည်။ထို့နောက် သခင်မကြီး(စ.အ)သည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရလေသည်။သခင်မကြီး(စ.အ)သည် ရှီအာတို့၏လေးပါးမြောက် ခေါင်းဆောင်(အေမာမ်) အလီအိဘ်နေဟိုစိုင်းန်(အ.စ)အတိုင်း အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရာတွင် အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များရှိနေသလို မိမိ၏နောင်တော်ဘက်မှ အပြည့်အဝရပ်တည်ခဲ့သူလည်းဖြစ်လေသည်။ဇိုင်နဘ်သခင်မကြီး(စ.အ)သည် အေဒီသက္ကရာဇ် (၆၈၁)ခုနှစ် ၊ ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် (၆၂)ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်တော်မူခဲ့လေသည်။သခင်မကြီး(စ.အ)သည် အဘ်ဒုလ္လာဟ်အိဘ်နေဂျာအ်ဖရ်နှင့် ထိမ်းမြားခဲ့ပြီးနောက် သား(၃)ဦးနှင့် သမီး(၂)ဦးထွန်းကားခဲ့သည်။ထို့နောက် အေဒီသက္ကရာဇ် (၆၈၀)ခုနှစ် ၊ ဟီဂျရီသက္ကရာဇ် (၆၁)ခုနှစ်တွင် နောင်တော်ဟိုစိုင်းန်(အ.စ)နှင့်အတူ ကရ်ဘလာသို့လိုက်ပါလာခဲ့သည်။နောင်တော် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) ရှဟီးဒ်ဖြစ်(အသတ်ခံရ)ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် သခင်မကြီး(စ.အ)သည် တူတော် အလီအိဘ်နေဟိုင်းန်(အ.စ)အား ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကာ အထူးစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ခဲ့လေသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် (ကဟ်ရမားန်-နေ-ကရ်ဘလာ) ကရ်ဘလာသူရဲကောင်း ဘွဲ့တော်ကို ဆောင်ခဲ့လေသည်။
ရှီအာမွစ်လင်(မ) သည် မွစ်လင်(မ)အသိုင်းအဝိုင်းအကြား စွန္နီမွစ်လင်(မ)ပြီးနောက်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပေသည်။ရှီအာမွစ်လင်(မ)တို့သည် တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)နှင့် သူ၏အနွယ်တော်ဝင်အဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)တို့၏သွန်သင်မှုအတိုင်းလျှောက်လှမ်းကြသူများဖြစ်ပေသည်။ထိုအဲဟ်လေဘိုင်းသ်(အ.စ)တို့သည် မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)မှတဆင့် ဖှာတေမာ(စ.အ)နှင့် အလီ(အ.စ)တို့မှဆင်းသက်လာခဲ့သည့်အတွက် ရှီအာမွစ်လင်(မ)တို့သည် တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)၏ မြေးတော်များကို မိမိတို့၏ခေါင်းဆောင်၊ဦးရှောင်နှင့် လမ်းပြသူများဟု သတ်မှတ်လက်ခံခဲ့ကြလေသည်။ရှီအာမွစ်လင်(မ)တို့အကြားတွင်လည်း စွန္နီမွစ်လင်(မ)များကဲ့သို့ ဂိုဏ်းဂဏ္ဍများအမျိုးမျိုးကွဲခဲ့လေသည်။ထိုဂိုဏ်းဂဏ္ဍများအကြား အုပ်စု(၃)သာ နောက်လိုက်များခဲ့ပြီး ကျန်ဂိုဏ်းဂဏ္ဍများတွင်မူ နောက်လိုက်နည်းပါးလေသည်။
နိုင်ငံရေးသမိုင်းရှု့ထောင့်အရကြည့်မည်ဆိုလျှင် ရှီအာ့သမိုင်းတွင် ခေတ် အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ပေသည်။ပထမဆုံးခေတ်သည် (တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည် အေဒီ(၆၃၂)ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်တော်မူခဲ့လေသည်။)ထိုသို့ကွယ်လွန်တော်မူသည့်ကာလမှစတင်ခဲ့ပြီး အေဒီ (၆၈၀)ခုနှစ် ကရ်ဘလာအခင်းဖြစ်ပွားချိန်ထိ ဖြစ်လေသည်။ထိုကာလသည် အေမာမ်အလီ(အ.စ)၊ဟစန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)နှင့် ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ(အ.စ)တို့ ၏ခေတ်ကာလများဖြစ်ပေသည်။၎င်းနောက်ပိုင်းတွင် မွစ်လင်(မ)ထုကြီးအကြား၌ ရှီအာမွစ်လင်(မ)ဟူသော ဂိုဏ်းသည် ကွဲပြားစွာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး စွန္နီခလီဖှာများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်ရှိခဲ့ကြလေသည်။ထိုကာလသည် ကရ်ဘလာအခင်းဖြစ်ပွားပြီးချိန်မှ ရှီအာများအတွင်းမှ လူ(၉၀၀)ခန့်စုစည်းခဲ့မိချိန်မှစတင်ခဲ့ပြီးနောက် လူဦးရေသည်လည်း တိုးပွားလာခဲ့လေသည်။ယင်းကာလအတွင်း ရှီအာတို့အကြားတွင် ဂိုဏ်းများအသီးသီးကွာသွားခဲ့ကြလေသည်။ရှီအာသမိုင်းတွင် တတိယခေတ်သည် (၇၈၀-၉၇၄)ခုနှစ်တွင် မိုရိုကိုနိုင်ငံ၌ အဒ်ရီးစ်ခေတ်များအကြား ပထမဦးဆုံးရှီအာအစိုးရကို ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေသည်။၎င်းနောက် အလာအဝေးဒ်ခေတ်များအကြား (၈၂၆-၉၂၈)ခုနှစ်များအတွင်း အီရန်နိုင်ငံ မာဇင်ဒရားန်(သဘဲရ်ရီစ်တာန်)ပြည်နယ်တွင် ရှီအာအုပ်ချုပ်ရေးကို ထူထောင်ခဲ့သည်။၎င်းတို့သည် ခေတ်နှစ်ဆက်တွင် အလွန်မှပင် အင်အားတောင့်တင်းသောသူများ ဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်။(၉၀၉)ခုနှစ်တွင် အရီကီယာဒေသ၌ ဖှာတေမီအုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ယင်းအုပ်ချုပ်ရေးသည် (၁၁၇၁)ခုနှစ်အထိ မိုရိုကို၊အီဂျီစ်နှင့် လဝါနသ် စသည့်နေရာဒေသအသီးသီးသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး ရှီအာအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေသည်။(၉၃၀)ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့်တွင် အီရန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ဘီဒီးဒ်မင်းဆက်များပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး ၎င်းအုပ်ချုပ်ရေးသည် (၁၀၄၈)ခုနှစ်အထိ အီရန်နိုင်ငံအတွင်းတွင်သာမက အီရတ်နိုင်ငံအထိ အာဏာစိုးမိုးခဲ့လေသည်။ထို့အပြင် ယီမန်ဒေသတွင်လည်း ရှီအာအေမာမ်များအဆက်ဆက်ရှိလာခဲ့သည်။သို့သော် ၎င်းတို့သည် ဇိုင်ဒီယာရှီအာများဖြစ်လေသည်။
အယ် ဟူစိန်အိဘ် အလီ အိဘ် အဘီ သွာလိဘ် (အင်္ဂလိပ်: Al-Ḥusayn ibn Ali ibn Abi Talib; အာရပ်: الحسين ابن علي ابن أبي طالب; ၁၀ အောက်တိုဘာ ၆၂၅ – ၁၀ အောက်တိုဘာ ၆၈၀) (ရှာဘန် ၃ ရက်၊ ဟီဂျရီခုနှစ် ၄ – ၁၀ Muharram AH ၆၁) သည် အစ္စလာမ် နဗီ (အာရပ်: نَـبِي, တမန်တော်) မိုဟာမက် ၏ မြေး နှင့် အလီ (ပထမဆုံး ရှီယာ အေမာမ် နှင့်ဆွန်နီ အစ္စလာမ် ၏ စတုတ္ထမြောက် Rashid caliph) နှင့် Fatimah (မိုဟာမက်၏ သမီး) တို့၏ သား ဖြစ်သည်။ သူသည် အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ရှာဘာန် ၁၅ ရက် ဟီဂျရီခုနှစ် ၄ တွင် မဒီနာမြို့တော်တွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ ဟီဂျရီ ၆၁မိုဟရမ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကရ်ဘလာစစ်ပွဲ၌ (မတရားလုပ်ကြံခြင်းခံရပြီး) ရှဟီးဒ် ဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ရှီအာတို့သည် သူ့အား ရှဟီးဒ်ခေါင်းဆောင် (အစ္စလာမ့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်) ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏ ကွန်နီယသ် (သားသမီးကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောအမည်) မှာ အဘာအဘ်ဒုလ္လာဟ် ဖြစ်ပြီး သူ၏ဖခည်းမည်းတော်သည် အလီ(အ.စ)နှင့် မယ်တော်မှာ ဖှါတေမာ(စ.အ) ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သူသည် တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်အိဘ်နေအဘ်ဒုလ္လာဟ်(ဆွ)၏ မြေးတော်လည်းဖြစ်ပေသည်။သူ၏သားတော် စဂျ်ဂျားဒ် သည် ရှီအာတို့၏ စတုထ္ထမြောက် အေမာမ်(ခေါင်းဆောင်) ဖြစ်သည်။ မြောက်များစွာသော မွစ်လင်(မ)တို့သည် သူ့အား တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏မြေးတော်ဖြစ်သည့်အတွက်နှင့် သူသည် အစ္စလာမ့်လမ်းစဉ်တွင် ကိုယ်ကျိုးစွန့် မိမိ၏အသက်ကို စတေးခဲ့သည့်အတွက် အရိုအသေပြုအလေးထားကြလေသည်။
အီရန်နိုင်ငံတွင် များစွာသော အားကစားအမျိုးအစားများကို လေ့ကျင့်လျက်ရှိနေကြသည်။ ထိုအားကစားအမျိုးအစားများထဲတွင် ခေတ်သစ်အားကစားနှင့် ရိုးရာ နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် အီရန်နိုင်ငံ တီဟီရန်မြို့တော်၌ အာရှအားကစားပွဲတော်ကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် တာဝန်ယူကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုသည် အနောက်အာရှမြို့တော်များအကြား ပထမဦးဆုံးကျင်းပခဲ့သော မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် လက်ရှိချိန်ထိလည်း မြောက်များစွာသော အားကစားများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိသည်။ အီရန်နိုင်ငံတွင် နပန်းပွဲသည် အီရန်တို့၏ ရိုးရာအားကစားဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ အီရန်နိုင်ငံတွင် လူကြိုက်အများဆုံးသည် ဘောလုံးအားကစားပင် ဖြစ်ပေသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အီရန်နိုင်ငံ စီပွားရေး အကျပ်အတည်းများကြောင့် အားကစား ဘတ်ဂျက်သည် ဒေါ်လာသန်း ၈၀ အစိုးရမှ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်ရခြင်းသည် အီရန်လူဦးရေအလိုက် တစ်ဦးလျှင် ၁ ဒေါ်လာနှုန်းသတ်မှတ်၍ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟိုစိုင်းန်အိဘ်နေအလီ အိဘ်နေအဘီသွာလိဘ် သည် ရှီအာတို့၏ တတိယမြောက်အေမာမ် ဖြစ်ပြီး ရှာဘာန် ၁၅ရက်ဟီဂျရီခုနှစ် ၄ တွင် မဒီနာမြို့တော်တွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည် ။ ဟီဂျရီ ၆၁မိုဟရမ်လ(၁၀)ရက်နေ့တွင် ကရ်ဘလာစစ်ပွဲ၌(မတရားလုပ်ကြံခြင်းခံရပြီး) ရှဟီးဒ် ဖြစ်တော်မူခဲ့သည် ။.ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ရှီအာတို့သည် သူ့အား ရှဟီးဒ်ခေါင်းဆောင်(အစ္စလာမ့်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်)ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ သူ၏ ကွန်နီယသ်(သားသမီးကို အစွဲပြု၍ ခေါ်သောအမည်)မှာ အဘာအဘ်ဒုလ္လာဟ် ဖြစ်ပြီး သူ၏ဖခမည်းတော်သည် အလီ(အ.စ)နှင့် မယ်တော်မှာ ဖှါတေမာ(စ.အ)ဖြစ်လေသည်။ ထို့အပြင် သူသည် တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်အိဘ်နေအဘ်ဒုလ္လာဟ်(ဆွ)၏ မြေးတော်လည်းဖြစ်ပေသည်။သူ၏သားတော် စဂျ်ဂျားဒ် သည် ရှီအာတို့၏ စတုထ္ထမြောက် အေမာမ်(ခေါင်းဆောင်)ဖြစ်ပေသည်။မြောက်များစွာသော မွစ်လင်(မ)တို့သည် သူ့အား တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏မြေးတော်ဖြစ်သည့်အတွက်နှင့် သူသည် အစ္စလာမ့်လမ်းစဉ်တွင် ကိုယ်ကျိုးစွန့် မိမိ၏အသက်ကို စတေးခဲ့သည့်အတွက် အရိုအသေပြုအလေးထားကြလေသည်။
အိုဘိုင်ဒွလ္လာဟ်အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် မိမိ၏စစ်တပ်ကို ဟေဂျားဇ်မှကူဖှာသို့ သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး၌ အပြည့်တပ်ဆွဲထားလေသည်။မည်သူကိုမျှ ထိုလမ်း၏အပြင်ထွက်ခွခွင့်မပြုခဲ့သလို ထိုလမ်းအတွင်းသို့ဝင်ခွင့်လည်းမပြုခဲ့ပါ။ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ကူဖှာသို့သွားနေစဉ် လမ်းခရီး၌ စာပို့သမားနှင့် ဆုံမက်ခဲ့ပြီး မိမိစေလွှတ်ခဲ့သော မွစ်လင်(မ)အိဘ်နေအကီးလ် လုပ်ကြံခံရမှုသတင်းကို ရရှိခဲ့သည်။ထိုအခါ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ဟေဂျားဇ်မှ မိမိနှင့်အတူပါလာသောသူတို့အား မိမိနှင့် လမ်းခွဲလိုက လမ်းခွဲနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့ပေမဲ့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လမ်းခွဲသွားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့ခရီးဆက်လာစဉ် လမ်းခုလပ်တွင် ဟူရ်အိဘ်နေယဇီးဒ်ရေယာဟီး၏ တပ်ဖွဲ့နှင့် ထိပ်တိုက် တွေ့ခဲ့ပြီး ထိုတပ်ဖွဲ့သည် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား ရှေ့မဆက်ရန် တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)နှင့် အပေါင်းအပါများကို စစ်မဖြစ်ပဲအသက်ရှင်လျှက် အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံခေါ်ဆောင်လာရန်အတွက် ဟူရ်အိဘ်နေယဇီးဒ်ရေယာဟီးအား အမိန့်ပေးထားသည့်အတွက် သူသည်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)အား အမိန့်အတိုင်း အိဘ်နေဇေယားဒ်ထံခေါ်ဆောင်သွားရန် ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)ဘက်မှ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ထို့နောက် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် နိုင်နဝါဒေသလက်အောက်ရှိ ကရ်ဘလာမည်သော နေရာတွင် စခန်းချခဲ့လေသည်။ မိုဟရမ်လ (၃)ရက်နေ့တွင် အိုမရ်အိဘ်နေစအ်ဒ်အိဘ်နေအဘီဝကားဒ် ဦးဆောင်သော စစ်သည်(၄၀၀၀)ရှိ တပ်ကြီးသည် ကရ်ဘလာ သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ အိုဘိုင်ဒွလ္လာဟ် အိဘ်နေဇေယားဒ်သည် ၎င်းအား အီရန်နိုင်ငံရှိ " ရိုင်းယ်"မြို့ကို အပိုင်စားပေးမည်ဟု ကတိပေးထားခဲ့သည့်အတွက် လောဘစိတ်ဖြင့် အိဘ်နေဇေယားဒ်၏အမိန့်ကို နာခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့အပြင် သူသည် အိဘ်နေဇေယားဒ် စိတ်ဆိုး၍ မိမိအားကြိမ်းမောင်းမှုကို မလိုလားသဖြင့် ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ငြိမ်းချမ်းမှုဆောင်သော အကြံပြုမိန့်ကြားချက်များကို လက်မခံခဲ့ပေ။ထိုသို့ငြိမ်းချမ်းမှုဆောင်သော ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏အကြံပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသမိုင်းရင်းမြစ်ကျမ်းများ၌ အမြင်ကွဲလွဲမှုများ မည်မျှပင်ရှိနေပါစေ။
Karbala အတွက် ရာသီဥတု အချက်အလက်များ